Okulandelayo | Ukuthuthukiswa Kobuholi NgeNe NextMapping ™ Cheryl Cran
Izinkampani ezizilungele esikhathini esizayo zakhiwa abaholi abakulungele esikhathini esizayo abanamakhono amakhulu ekushintsheni kwezinguquko nasekushintshashintsheni ngesivinini esikhulu soshintsho.
Sisebenzisana namakhasimende ethu ukukhipha amasu okuthuthukisa ubuholi ukuthi asheshe, enze izinto ezintsha futhi asize inhlangano ukuba ilungele ikusasa manje.
Abangafundile bekhulu lama-21 ngeke kube yilabo abangakwazi ukufunda nokubhala, kodwa labo abangakwazi ukufunda, ukungafundi nokufunda. ”
Ikusasa lama-keynotes omsebenzi ahlinzeka ngemininingwane, ucwaningo kanye nemephu yomgwaqo yokuthi ungasukela kanjani manje nakusasa.
Amagama aqukethe ubuholi ahlinzeka ngemibono eguqukayo nezindlela zokudala ukusiza ekwakheni ubuholi obulungele ikusasa eliqhubekisela phambili inguquko ebhekelele nekusasa lomsebenzi.
Zihlelele ikusasa lakho
Sisebenza nawe ukuletha umbono wakho ophefumlelwe wekusasa empilweni. Ngenqubo yethu ye-NextMapping ™ sinikeza abesilisa nabesifazane ebuholini ngezinsizakusebenza, ukuthuthukiswa nezinyathelo ezisebenzayo ukukusiza ukudala ikusasa lakho eliqhakazile.
Sekuyisikhathi sokwenza izakhono nokwenza kabusha amakhono ngamakhono wokulungela esizayo
Ukuze usinde futhi uchume kulezi zikhathi ezishintsha kuhambisane nezimo futhi nezishintsha ngokushesha, amadoda nabesifazane ebuholini badinga ukuthuthukisa amakhono adingekayo, izimilo, amathuluzi nezinto zokuqonda.
Inselelo ye-quo yesimo
Isikhathi sokusebenza kwengqondo emgqeni sesiphelile - abaholi kumele basebenzise i-mindset yelukuluku lokwazi ngokuqhathanisa lapho bafuna njalo ukuqinisekisa lokho abafuna ukuba yiqiniso ekuthuthukisweni kobuholi okusebenzayo.
Imephu amasu akho wesikhathi esizayo
Amasu amahle aqala ngokuthi 'kungani' futhi aqale ngemiphumela yangakusasa engqondweni. Abaholi abalungele ikusasa babeka izisekelo ezifanele zokwakha ikusasa labo abalifunayo. Hlela izinyathelo ngokuhlela izinsuku eziyishumi, izinyanga eziyishumi noma iminyaka eyishumi.
Izinqumo ezinhle kakhulu zenziwa ngemininingwane yamanje, enembayo kanye nomongo ofanele. Izindlela zethu zokucwaninga zifaka ucwaningo, imithombo yezokuxhumana, iqembu lama future futists kanye nososayensi bokuziphatha, kanye namaqembu agxile kwabesilisa nabesifazane ebuholini nokuningi.
Ngabe udinga usizo lwethu ngokuthuthukiswa kokuhola imephu?